उनीहरु सबै बाहिर !!!4सरल चीजहरु सबैले अब गर्न सक्छन्। - शान्ति शिक्षा को लागी ग्लोबल अभियान
उनीहरु सबै बाहिर !!!4सरल चीजहरु सबैले अब गर्न सक्छन्।
अगस्ट 22, 2021 कार्य चेतावनी, समाचार र हाइलाइटहरू 0
जोखिममा रहेका प्रत्येक अफगान नागरिक-महिला, पुरुष, बालबालिका, वृद्ध, अपा dis्गता भएकाहरु-लाई शरण दाबी गर्ने अधिकार छ। हामीले ती सबैलाई बाहिर निकाल्नु पर्छ। पूर्ण र पूर्ण निकासी नैतिक र व्यावहारिक अनिवार्य छ। यहाँ4सरल कार्यहरु सबैले यो प्रयास को समर्थन गर्न सक्छन्।
अफगानिस्तान मा नागरिक समाज को कार्य को लागी अन्य भर्खरको अपील यहाँ हेर्नुहोस्।
उनीहरु सबै बाहिर प्राप्त !!!!
जब हामी काबुल बिमानस्थलमा घातक अराजकता देख्छौं, निराशा मा पर्न को लागी, हामी यस भयावह स्थिति लाई पार गर्न को लागी कार्य गर्ने तरिकाहरु खोज्न को लागी, हाम्रो आवाज उठाएर सबै को लागी घातक खतरा मा सुरक्षित निकासी को माग गर्दछौं।
यहाँ4सरल चीजहरु तपाइँ आफ्नो आवाज उठाउन र उनीहरुको उठाउन अरुलाई कल गर्न को लागी अहिले गर्न सक्नुहुन्छ:
डाउनलोड गर्नुहोस् र तल पत्र टेम्प्लेट भर्नुहोस् (तपाइँको देश र तपाइँको नाम भर्नुहोस्)।
संयुक्त राष्ट्र को लागी तपाइँको देश को राजदूत को नाम र ईमेल ठेगाना हेर्नुहोस्, र उनीहरुलाई भरेको पत्र को एक प्रति ईमेल गर्नुहोस्।
तपाइँको मन्त्री/विदेश मामिला सचिव को नाम र ईमेल ठेगाना हेर्नुहोस्, र उनीहरुलाई भरेको पत्र को एक प्रति ईमेल गर्नुहोस्।
यो सन्देश पठाउनुहोस् सकेसम्म धेरै मानिसहरु जो हेरचाह र कार्य गर्न सक्छन्। मिडिया को कुनै पनी रूप बाट तपाइँ नियमित रूप बाट प्रयोग गरेर पठाउनुहोस्।
एकता र विश्वव्यापी समुदाय जिम्मेवारी को एक कार्य मा आफ्नो आवाज उठाउन को लागी धन्यवाद।
- शान्ति शिक्षा को लागी ग्लोबल अभियान (8/22/2021)
टेम्पलेट को एक एमएस वर्ड संस्करण डाउनलोड गर्नुहोस् (वा तलको पाठ प्रतिलिपि गरेर टाँस्नुहोस्)
उनीहरु सबै बाहिर !!!
प्रत्येक अफगान नागरिक जोखिममा - महिला, पुरुष, बच्चाहरु, वृद्ध, अपा dis्गता भएकाहरु - शरण दाबी गर्ने अधिकार छ। यो सराहनीय छ कि संयुक्त राज्य अमेरिकाले वाणिज्यिक एयरलाइन्सहरुलाई सूचीबद्ध गरीएको छ कि वर्तमान निकासी स्थलहरु बाट बस्ती को बिन्दुहरुमा मानिसहरु लाई ल्याउन। जे होस्, हजारौं धेरै एयरपोर्ट बाहिर र देश भर मा आफ्नो जीवन को डर मा रहन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय - संयुक्त राज्य अमेरिका र विशेष गरी नाटो राष्ट्रहरु - उनीहरुलाई बाँच्न सम्भव बनाउन जिम्मेवारी लिन्छन्। देशको भविष्य उनीहरुको जीवन बचाउनमा निहित हुन सक्छ जो एक दिन देश को पुनर्निर्माण मा फर्कन सक्दछन् कि उनीहरु लाई २१ मा ल्याउन धेरै मेहनत गरे।st शताब्दी अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय। हामीले ती सबैलाई बाहिर निकाल्नु पर्छ। पूर्ण र पूर्ण निकासी नैतिक र व्यावहारिक अनिवार्य छ।
को नागरिक को रूपमा [तिम्रो देश], म मेरो सरकार लाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न आग्रह गर्दछु, अन्य राष्ट्रहरु संग र संयुक्त राष्ट्र संघ को माध्यम बाट अफगानिस्तान छोड्न चाहने सबै लाई खाली गर्न। हामी आश्वासन को लागी बिन्ती गर्दछौं कि:
काबुल बिमानस्थल खाली राखिनेछ जब सम्म खाली पूरा गरीन्छ;
कि सुरक्षित गलियारे र हवाई अड्डा को लागी यातायात स्थापित गरिनेछ;
त्यो सीमाहरु अन्य देशहरु को लागी भूमिगत निकास र सुरक्षित यातायात को लागी प्रदान गर्न को लागी अनुमति दिन को लागी खोलिनेछ;
कि सबै सीमावर्ती देशहरु, देशहरु हाल निकासी स्थलहरु र अन्य देशहरु जसमा उडानहरु गर्न सकिन्छ, स्वागत छ र evacuees को लागी अस्थायी हेरचाह प्रदान गर्ने होस्टिंग;
त्यो "कागजी कार्य" भिसा को लागी आपतकाल को लागी सरलीकृत गरिनेछ, र यस उद्देश्य को लागी कागजात केन्द्रहरु बिमानस्थल मा र सीमा स्थलहरुमा जहाँ निस्कन सम्भव छ स्थापित गरिनेछ।
Rwandan माध्यमिक विद्यालयहरु मा शान्ति शिक्षा: विरोधाभासी सन्देशहरु संग सामना
गुणस्तरीय शिक्षा, हेरचाहको स्कूल संस्कृति, र मनोवैज्ञानिक कल्याण: लेबनानको एक सार्वजनिक स्कूलमा सिरियाका बच्चाहरूबाट आवाजहरू
नोभेम्बर 28, 2020 समाचार र हाइलाइटहरू 0
लेबनानको एक सार्वजनिक विद्यालयमा हाजीरको भर्खरै गरिएको अनुसन्धानमा सिरियाली बच्चाहरूको स्कूल-स्तरको अनुभवले जोड दिन्छ कि जहाँ शरणार्थीहरूलाई राष्ट्रिय स्कूलमा समावेश गरिएको छ, उनीहरूले उनीहरूको मनोवैज्ञानिक कल्याण सुधार गर्ने केही अवसरहरूबाट बञ्चित महसुस गरिरहेछन्। उनको अनुसन्धानले यो पनि खुलासा गर्‍यो कि शारीरिक र मनोवैज्ञानिक सुरक्षित वातावरण बाहेक केयरको संस्कृति स्थापना गर्नु विद्यार्थीको 'गुणस्तरीय शिक्षा' बारेको दृष्टिकोणलाई सम्बोधन गर्न महत्वपूर्ण छ। [पढ्न जारी राख्नुहोस् ...]
शरणार्थी आवाजहरू कक्षाकोठामा ल्याउँदै
जुलाई 17, 2018 गतिविधि रिपोर्टहरू 0
नाटकमाल (अरबी भाषामा "हामी बोल्छौं") एक सामाजिक उद्यम हो जसले विस्थापितहरूलाई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दछ मुख्यत: सिरिया र इराकबाट र शरणार्थी आवाज, सांस्कृतिक आदानप्रदान, र संसारभरका मानिसहरूलाई भाषा सिक्ने अवसरहरू दिन्छ। नाटाकलमले १ 65 देशहरूमा 25 13 भन्दा बढी स्कूलहरू र २ XNUMX विश्वविद्यालयहरूसँग साझेदारी गरीरहेको छ। [पढ्न जारी राख्नुहोस् ...]